YEYIPHI IMIGAQO YOKUGCINA ISHIVA LINGA EKHAYA? - INYANI.COM - YOGA-YOKOMOYA
Ukugcina iShivlinga Ekhaya: Imithetho kufuneka iqatshelwe
Iindaba Ayisi-4, imikhosi esembindini kufuneka ibulale i-8: inkokeli ye-BJP
Iimuvi IGudi Padwa 2021: Amitabh Bachchan, Kajol kunye nabanye ooCelebs bathulula kwiminqweno yabo
Itekhnoloji UVivo X60 uphononongo olukhawulezayo: Eyona nto ilungileyo yokuthenga kwi-Sub-40K yamaxabiso amaxabiso
Imidlalo I-IPL 2021: UZaheer ucacisa indlela amaIndiya aseIndiya aza kuyisebenzisa ngayo 'ikhadi lexilongo' iBumrah
EzeMali I-PPF okanye i-NPS: Zeziphi izikolo ezinokuKhetha ukuTyala uMhlala-phantsi okungcono?
Iimoto I-Yamaha MT-15 ene-Dual-Channel ye-ABS eza kumiliselwa kungekudala amaxabiso asetelwe ukunyusa kwakhona
Imfundo Isiphumo sokugqibela sama-2021 samapolisa e-Bihar Bihar
Ekhaya Yokomoya yeYoga Inkolelo eyimfihlakalo Ukholo Mysticism oi-Renu Ngu Renu ngoNovemba 30, 2018
Siyazi ukuba ukubonelela ngobisi namanzi kwiShivlinga kuye kwacetyiswa kwizibhalo zamaHindu kwaye kwathiwa kuluncedo olukhulu. Yiyo loo nto ngomhla weShivratri, onke amaHindu kwihlabathi liphela emanyene ukwenza imithandazo ku-Lord Shiva kwaye bandwendwela iitempile ukuya kunika iShivlinga amanzi. Yiyo loo nto, ngezibonelelo ezininzi ezinxulunyaniswa nokunqula kweShivlinga, wonke umntu ozinikeleyo kwiNkosi uShiva angathanda ukugcina iShivlinga ekhaya, ukuze bayikhonze yonke imihla.
lux igolide rose amabhaso 2016 umhla
Nokuba kufanele siyigcine iShivlinga ekhaya okanye hayi bekungumbandela ophikisanayo. Ngelixa abanye abantu benoluvo lokuba kuyinto entle ukugcina iShivlinga ekhaya, abanye banoluvo lokuba singayigcina, ukuba nje iyathotyelwa imigaqo. Apha sikulethe uluhlu lwemithetho ekufuneka igcinwe malunga nokugcinwa kweShivlinga ekhaya. Thatha ujongo.
UShivlinga uthetha uphawu lweNkosi Shiva. Xa senza umthandazo kwisimboli sobuthixo, kuthiwa isithixo okanye isimboli sifumana amandla athile kaThixo okwangummeli wobuthixo. Ukugcina uphawu olunye kwaye kungabikho ngaphezulu koko kuyimfuneko kumandla kaThixo ukuze ahlale kwisimboli emele oko. Ngenxa yoko, akufuneki sigcine ngaphezulu kweShivlinga ekhaya. Ngaphaya koko, kuba u-Lord Shiva mnye, akufuneki sisebenzise iisimboli ezahlukeneyo endaweni enye.
Abantu abaninzi bagcina iiShivlingas ezinkulu ezibonakala zinomtsalane kwaye zibambe amehlo abatyeleli endlwini yabo. Oku akuthathwa njengokuchanekileyo. Endaweni yokuba kuthiwe iShivlinga egcinwe ekhaya kufuneka ibe ncinci, ubungakanani bayo akufuneki bube ngaphezulu kobukhulu besithupha. IShivlinga enkulu, kwelinye icala, kufuneka ithathelwe ingqalelo kuphela kwiitempile.
Kuyimfuneko ukuba iShivlinga egcinwe ekhaya kufuneka inqulwe ngawo omabini amaxesha omhla. Ukuba ukuthandaza kuyo ekuseni nangokuhlwa akunakwenzeka, akufuneki kuyigcine ekhaya. Ntsasa nganye emva kokuhlamba, i-tilak ene-sandalwood paste kufuneka isetyenziswe kuyo. Ungaze usebenzise i-sindur okanye i-turmeric njenge-tilak kwi-Shivlinga.
Sukusebenzisa amanzi eCoconut
IShivlinga inokuhlanjwa ngobisi, amanzi kunye ne-gangajal exutywe kunye. Kodwa ungaze usebenzise amanzi ecoconut njengomnikelo kwiShivlinga. Nangona kunjalo, iikhokhonathi eziluhlaza zihlala zinikezelwa kwiShivlinga. Olunye uluvo lubanjwe kukuba iShivlinga akufuneki igcinwe kwindawo evaliweyo. Indawo evulekileyo ilungile kwaye inomdla wokuseka iShivlinga.
UJaladhara Wokubaluleka Okuphambili
Ngelixa kusithiwa iShivlinga kufuneka ikhonzwe ngazo zonke iinkqubo kunye nePuja epheleleyo kufuneka inikezelwe kuyo, ikwakholelwa ukuba ukubonelela ngamanzi kanye ngeveki (into eyenziwa ngabantu ngokubanzi) ayisiyonto ilungileyo. Endaweni yoko, iJaladhara (umthombo wamanzi) kufuneka ihlale ibaleka ngaphezulu kweShivlinga. Kuba kukho ukuhamba kwamandla okuqhubekayo, kufuneka kubekho iJaladhara yokunyanzela amandla.
Musa ukuhambisa iTulsi
Ezinye iintyatyambo eziqalekiswe yiNkosi uShiva akufuneki zinikezelwe kuye okanye kuShivlinga. Enye into ekufuneka igcinwe engqondweni kukuba iintyatyambo kufuneka zibe mhlophe ngombala. Nokuba amagqabi eTulsi akufuneki anikwe iShivlinga.
Izinto ezenziwa nguShivlinga
Kucatshangelwa ukuba ukugcina iShivlinga eyenziwe ngelitye efumaneka kumlambo iNarmada kuthathwa njengeyona nto inomdla. Imathiriyeli eyenziwe ngayo iShivlinga kufanelekile ukuba ibe leli litye. Nangona kunjalo, xa iShivlinga eyenziwe ngesinyithi isekiwe, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kufuneka yenziwe ngegolide, isilivere okanye ubhedu, kwaye inyoka eyenziweyo kufuneka ibekhona ihleli ijikeleze iShivlinga.
Usuku lwabantwana u-2020: Yazi ukuba kutheni le nto iqatshelwe nge-14 kaNovemba
Ukuzaliswa kweNja eziPhezulu eziPhezulu ezili-10
Isicwangciso sokutya sangaphambi kokuSebenza: Yintoni oza kuyitya ngaphambi kokuSebenza
Unyango lwe-Ayurvedic lokuNciphisa iBelly Fat
Fumana igama, Udumo kunye neMpilo ngokujonga iNirjala Ekadashi ngokukhawuleza
Izibonelelo zeMpilo yeTomato Soup
Imithambo yokuKhula kwebele
USuku lwaBafundi beHlabathi: Umzuzu oQhelekileyo oQeqeshwayo oQeqeshwayo o-5 waMantombazana aseKholejini
Ukutya okunezondlo okuNceda ukuKhulisa iindevu
I-Onam 2020: Yeyiphi iMbali yokuBhiyozela lo Mnyhadala uthandwayo?
IHariyali Teej Puja Izinto kunye nendlela yokwenza iPooja
Kwenzeka ntoni xa usela Ijusi yeKarela kunye neJuice yeKherothi?
angakanani amanzi okusela ngemini ehlotyeni
indlela yokwenza iinwele ezomileyo zithambe kwaye zibe silky ekhaya
zingaphi surya namaskar ukwenza
emva kweentsuku ezingaphi zokukhulelwa ukugabha kwenzeka
uyibopha njani isarike yothixokazi lakshmi
ipakethe yobuso besikhumba esomileyo ukuze kukhanye
pyar to hona hi tha ividiyo ingoma